67ha : Olona efatra nahatrarana héroïne -
AccueilSongandina67ha : Olona efatra nahatrarana héroïne
Tsy misy fitsaharana. Nangina kely indray ny an’ny teratany vahiny amin’ny trafikana “héroïne”, dia manao io afera io ihany koa ny teratany malagasy. Lehilahy miisa telo, ary vehivavy iray no nosamborin’ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina, rehefa nahazoana vaovao fa mitana héroïne. Teny amin’ny manodidina ny 67 ha izy ireto no voasambotra, ny tolakandron’ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 3 ora hariva. Bolongana “héroïne” sy ireo fonosona maromaro samihafa fanapoahana izany rongony mahery vaika izany 100 grama no sarona, rehefa natao ny fisavana ny trano nitoeran’izy ireo, niaraka tamin’ny fitaovana fandanjana azy.
Araka izany, noho ny fiaraha-miasan’ny polisim-pirenena avy ao amin’ny Boriborintany fahafito sy ny polisy misahana ny ady amin’ ny zava-mahadomelina, dia efatra ary vehivavy ny iray tamin’ireo voasambotra teny amin’ny manodidina ny fokontanin’Ankasina iny ny alahady iny. Naharay vaovao mialoha ny mpitandro filaminana, amin’ny fisian’ireto andian’olona ireo mihaodihaody sy nikononkonona asa ratsy. Nidina teny an-toerana avy hatrany araka izany ireo polisy nanao fisafoana, ka tra-tehaka teny akaikin’ ny toeram-pivarotana iray teny an-toerana izy ireo. Rehefa nosavaina io trano io dia nahitana « héroïne » tanaty fonosana maromaro sy « haschich » milanja 100 grama sy fitaovana maromaro toa ny sotrokely sy « seringue » miisa telo, ary « briquet » roa ihany koa. Rehefa nohadihadiana izy ireo, dia niaiky fa azy ireo zava-mahadomelina ireo sy ireo fitaovana fampiasa amin’izany. Notohizana teo anivon’ny sampandraharaha manokan’ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina etsy Anosy ny raharaha ny alatsinainy, ka dia natolotra ny fampanoavana ny raharaha. Nahiditra am-ponja vonjimaika izy ireo, taorian’ny fakana am-bavany azy.
Gineanina, Afrikanina, Malezianina miray tendro amin’ny Malagasy. Saika efa rava teto avokoa ireo mpivahiny mikasa hanao ny trafika. Hatreto dia mbola tsy tratra ny tena ambadik’izao, ary mbola mitohy ny fanadihadiana. Araka ny efa fahita moa dia rehefa tsy tratra eto amintsika izany zava-mahadomelina izany, dia sarona any Maorisy. Anisany ilay tovovavy malagasy mpianatra voasambotra nitondra “héroïne” milanja 216 grama, tao Nosy Maorisy. Tsy lazaina intsony ireo teratany vahiny, izay efa maro no voapaingotra sy naiditra am-ponja. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra amin’ity fiparitahan’ny zava-mahadomelina ity eto amintsika?